400 magacyada Labrador ee ugufiican kuwa gaar ah oo qabow - Taranka
400 magacyada Labrador ee ugufiican kuwa gaar ah oo qabow
Magac bixinta eey gabi ahaanba waa muhiim . Dhamaanteen waxaan dooneynaa inaan soo koobno ​​nuxurka eeyga. Markay tahay Labradors, iyagu waa a qorrax leh, madadaalo jecel, nooc firfircoon ee eyda isboortiga jecel dad badan .
Halkan waxaan ku haynaa dhammaan magacyada eyda ugu caansan uguna fiican hal meel. Haddii aad raadineysid magacyada Shaybaarka Madoow, magacyada Shaybaarka Shukulaatada, magacyada Lab Yellow… Waxaad heleysaa sawirka.
Diyaar ma u tahay inaad hesho cunuggaaga magaca saxda ah?
Waa maxay magac wanaagsan oo loogu talagalay Labrador Retriever?
Maxaa ku jira magac? Magacyada Hawlgabka Labrador ee Caanka ah
Magacyada Hawl-gabka Labrador ee Ugu Fiican
Maxaan ku magacaabaa Labrador Retriever?
Magac wanaagsan ayaa si fudud loogu dhawaaqaa. Uma baahnid wax si xad dhaaf ah u murugsan mooyee haddii aad rabto in eeygaagu u baxo naaneys. Tusaale ahaan, Maximus waxaa lagu soo gaabin karaa Max.
Hal ama laba magac oo dhawaaqeedu yihiin kuwa ugu fiican ee labrador yar yar ah maxaa yeelay waxay ugu jawaabaan sida ugu fiican codadka.
Sidoo kale, tabaha tababarka pro: ha u magacaabin eeygaaga wax la mid ah amar. Waxay ku wareeri kartaa saaxiibkaaga dhogorta badan markaad u sheegto, 'Kit, fadhiiso' ama 'Clay, joog'.
Waxaa lagu doodi karaa mid ka mid ah shaybaarada ragga ugu caansan waqtiga oo dhan Marley . Qaar badan baa isaga u garanaya inuu yahay eeyga waalan ee ka yimid Marley iyo Aniga . Isagu ma aha oo kaliya Labrador Retriever caan ah oo ku wareegsan. Waa kuwan qaar laga yaabo inaad maqashay.
Labradors caan ku ah Instagram-ka
Adduunyada ay baraha bulshada meel walba ku yaalliin, la yaab ma leh in la arko qaar ka mid ah eeyaha Labrador Retriever ee ku beerma kuwan soo socda ee iyaga u gaarka ah. Waxa ugu caansan:
Labradors TV-caan ah
Waa kuwan jilayaasha Labrador ee shaashadda shaashadda weyn iyo kuwa yarba leh:
Brandeis - Wadada sisinta
Brian Griffin - Guy Qoyska
Clifford - Ey Big Cas
Krypto - Superman (majaajillo)
Little Boo - Liinta waa madow cusub
Marley - Marley & Aniga
Vincent - Lumay
Labradors milkiile caan ah
Waad maqasheen oraahda 'dadka caanka ah waa sidayada oo kale', laakiin waxaan hubnaa in eygooda ay ku noolyihiin nolol xitaa kaba sii liidan. In kasta oo laga yaabo inaannaan awoodin inaan siinno eeyaha qoyskeenna daaweyn isku mid ah, waxaan ka heli karnaa xoogaa dhiirrigelin ah magacyadooda 'Lab puppy names'.
Harvey - Amiir Charles
Dhabarta - Sandra Bullock
Magacyada Labrador-caan ah oo caan ah
Waxaa laga yaabaa inaad aad u xiiseyneyso inaad haysato Shaybaar loogu magac daray qof caan ah. Waa kuwan magacyo dhowr ah oo suuragal ka dhigi kara saaxiibkaaga cusub ee ugu fiican.
Muxuu noqon karaa magaca ugu fiican ee eygan caanka ah? Eeyahaani waa kuwo la isku halleyn karo oo naxariis badan, sidaa darteed waxaan u maleyneynaa in magacyadooda ay noqdaan kuwo isku mid ah oo kalsooni leh.
Haddii aad ka dambayso qaar ka mid ah magacyada eyda dheddig ama magacyada eyga lab, waxaad ka heli doontaa waxaad ka raadineyso magacyada aadanaha ugu sarreeya shaybaarkaaga hoose. Waxaan sidoo kale xushmee shaybaarka Kanada adoo kudaraya labo magac oo caan ka ah Kanada.
Magacyada Hawlgabka Dumarka Labrador
Magacyada Hawlgabka Lab Labrador
Magacyada Labrador ee ku saleysan Midabka
Shaybaarada waxay ku yimaadaan seddex midab oo kala duwan. Madow, Shukulaatada, iyo Jaale. Magacaabista furkid-kaaga oo ku saleysan midabkeeda jaakad waa dhaqan caadi ah .
Waa hal shay oo aan hubno, gaar ahaan hadduu yahay eey cusub oo aan badbaadin ahayn. Waxaan helnay magacyada lab iyo dhedig labba xulba.
Magacyada Black Labrador
Black Labrador Soo-celinta ayaa muddo dheer lala xiriirinayay ugaarsiga . Waxaa sidoo kale loo tixgeliyaa midabka asalka ah ee Labradors. Haddii aad u hanqal taagayso magac ka turjumaya mid ka mid ah astaamahan, fiiri xulashooyinkayaga ugu sarreeya.
Magacyada Jaallaha Labrador
Sheybaarada jaallaha ah waxay u dhexeeyaan caddaan illaa dawaco cas. Jaalaha ugu caansan wuxuu la mid yahay Golden Retriever, oo waxaan ku bilaabi doonnaa kuwaas.
Jaale waa midabka farxadda oo badanaa laxiriira qorraxda. Magacyada shaybaarada huruudda ah waa inay noqdaan kuwo ifaya oo yididiilo leh .
Magacyada Shukulaatada Labrador
Sheybaarada shukulaatada ayaa u muuqda kuwo kufiican in la cuno , iyo magacyada la xiriira cuntada iyaga ayaa ugu fiican iyaga.
Laakiin waxaan ku dhex tuurnay dhowr supermodel iyo magacyo naqshadeeye halkaas maxaa yeelay Sheybaarada Shukulaatada ayaa lala xiriiriyaa far-galka. Waa maxay eeyaha show, haddii aysan dhalaalin?
Magacyada Fox Red Labrador
Fox Red Shaybaarradu waa kuwo waxyeello leh waana u maleyneynaa taas waxay u baahan yihiin magacyo waaweyn oo lama ilaawaan ah . Waa kuwan qaar aan u soo xulnay milkiileyaasha eyda cusub oo aan wax fikrad ah ka haysan halka ay ka bilaabayaan. Waxaan rajeyneynaa, inay ku siinayaan xoogaa dhiirrigelin ah!
Magacyada White Labrador
Shaybaarka Cad ayaa si fudud u qurux badan in la fiiriyo. Hadday eygaaga cad yahay lab ama dhadig lab, halkan waa kuwan dhowr magac oo caan ah oo caan ku ah xayawaankaaga cusub .
Magacyada Labrador ee Dabeecadda
La kulan Wabiga, shaybaar 6 bilood jir ah - Isha sawirka
Shaybaarada ayaa jecel dabeecadda. Waxay jecel yihiin dabaasha, socodka, raacdada urta . Iyagu waa ugaarsadeyaal dhammaantood, iyo magacyada la xiriira dabeecadda ayaa caan ku ah milkiilayaasha Shaybaarka. Waa kuwan qaar ka mid ah magacyada ugu quruxda badan ee aan heli karno!
Magacyada sida Magacyada Labrador
Haddii aadan aad u xiiseyneynin inaad yeelato magaca koowaad ee aadanaha ama magac u waxyoonay midab ama dabiiciyan, sidee ku saabsan adeegsiga magacyada qoysaska? Waxaan halkaan ku helnay xulashooyin waaweyn.
Magacyada Taariikheed ee Labradors
Haddii aad tahey taariikhyahan ama aad u jeceshahay quraafaadka, maxaad u hubin weyday qaar ka mid ah magacyada taariikhiga ah shaybaarkaaga?
Augustus (Imbaraadoorkii Roomaanka)
Goliath (Jaantuska Baybalka)
Gulliver (Dabeecad khayaali ah)
Midas (Boqorka khiyaaliga ah)
Sulaymaan (Jaantuska Baybalka)
Titan (ilaah Griig ah)
Guinevere (Dabeecad khayaali ah)
Florence (Kalkaaliye caafimaad)
Hera (ilaah Griig ah)
Yesebeel (Jaantuska Baybalka)
Joan (Halyeey Dagaal)
Mary (Jaantuska Baybalka)
Magacyada Suugaanta ee Labradors
Khayaali sidoo kale waa il weyn oo waxyi ah , gaar ahaan haddii aad tahay buug-qoris. Aynu ku dhex daadhno magacyada buugaagta aannu ugu jecel nahay inoo leeyihiin.
Frodo (Sayidka siddooyinkii)
Gandalf (Eebaha siddooyinkii)
Jace (Qalabka Dhimashada)
Percy (Tuuggii danabka)
Pippin (Sayidka siddooyinkii)
Arwen (Eebaha siddooyinkii)
Clary (Qalabka Dhimashada)
Jo (Haweenka Yar)
Katniss (Ciyaaraha Gaajada)
Lyra (Qalabkiisa Madoow)
Sara (Princess The Little Princess)
Taangiyada (Harry Potter)
Magacyada Super Hero Labrador
Labradors waa superhero shaqsiyadeed . Way na raaxaystaan ​​markaan murugaysan nahay, waxay naga ilaaliyaan xumaanta si fudud iyagoo u eegaya wax culus.
Waa kuwan astaamo yar oo dhaqanka pop-ka ah oo aad ka qaadan karto tilmaantaada!
Shuri (Madow Madow)
Gamora (Ilaaliyaha Galaxy)
Rajo (Wasp The)
Jean Gray (X-nin)
Magacyada Labrador ee Astaamaha Carruurta
Il kale oo weyn oo dhiirrigelin ah ayaa ka timaadda kartoonnada! Kaliya maaha inay nasiiyaan xusuus wanaagsan, waa sida haysashada jilayaasha noogu jecel nolosha . Qaarkood waxay sameeyaan magacyo Labrador dumar ah oo cabsi badan, halka kuwa kale ay yihiin magacyo eey oo fiican.
Andy (Sheekada Ciyaaraha)
Baloo (Buugga Jungle)
George (Cajiib George)
Sonic (Geedka Geedka)
Simba (Boqorka Libaaxa)
Toothless (Sida Loo Tababaro Dragonkaaga)
Jane (Peter iyo Jane)
Magacyada Labrador Cute
La kulan Lola, shaybaarka Choco - Isha sawirka
Waxaad u adeegsan doontaa magacan maalin kasta, tababarka eyga, iyo wadahadalka, sidaas hubi inay tahay wax aanad ku xanuunsan doonin .
Waxaan kugula talineynaa inaad soo xusho dhowr magac oo aad la wadaagto qoyskaaga ama asxaabtaada oo aad aragto waxa ay u maleynayaan. Dhawaaq kor ugu dhawaaq dhowr jeer si aad u tijaabiso.
Dhamaadka maalinta, waa inay noqotaa wax aad jeceshahay!
Miyuu yahay Feejignaanta Flat-Coated saxan saxeexa adiga kugu habboon?
7 Tusaalooyinka dhabta ah ee aduunka ee luuqada jirka eeyga oo wata sawiro & kedis
kareem yar oo Ingiriis ah oo dahab ah
Magacyada yeeyga caanka ah ee filimada
waxa loo yaqaan isku dhafka yorkie iyo chihuahua
shih tzu iyo chihuahua isku darka
magacyo qurux badan oo eyda yaryar ah